ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်မ - Winkabar
Posted: 7:56:00 PM
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီးတော့ လန့်မသွားပါနဲ့ဦး။ "ကျွန်တော်" နဲ့ "ကျွန်မ" နာမ်စားတွေအကြောင်းပြောမလို့ပါ။
ယောက်ျားတွေနဲ့ မိန်းမတွေသုံးရတဲ့ နာမ်စားက "ကျွန်တော်" နဲ့ "ကျွန်မ" ။ ယောက်ျားတွေသုံးတာက "ကျွန်တော်" ၊ မိန်းမတွေသုံးတာက "ကျွန်မ" ။
စဉ်းစားကြည့်ရင် "ကျွန်မ" ဆိုတဲ့ နာမ်စားက "ကျွန်တော်" ဆိုတဲ့ နာမ်စားလောက် သုံးရတာ မလွယ်ဘူး အဆင်လည်းမပြေဘူး။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က ဆိုပါတော့ ၇ နှစ် ၈ နှစ်လောက်ကတည်းက သူ့ကိုယ်သူ "ကျွန်တော်" ဆိုပြီးတော့ သုံးလို့ရတယ်။ အဲလိုသုံးလို့ရတော့ သူ့အတွက် အဆင်ပြေတယ်။ ကြားရတဲ့လူကလည်း ဟာ.. ဒီကလေးတော်တော် ယဉ်ကျေးပါလားဆိုပြီးတော့ ကောက်ချက်ချသွားရော။ ဒါပေမဲ့ ၇ နှစ် ၈ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သူ့ကိုယ်သူ "ကျွန်မ" ဆိုပြီးပြောရင် ကြားရတဲ့လူက နားထဲမှာ ကန့်လန့်ကြီးဖြစ်နေရော။ အဲတော့ တော်ရုံတန်ရုံဆို ကောင်မလေးငယ်ငယ်လေးတွေက စကားပြောရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို "သမီး" ဆိုပြီးသုံးကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲလို သုံးတာက အရွယ်တစ်ခု ဥပမာ ၁၆၊ ၁၇ အရွယ်လောက်ရောက်တော့ သုံးလို့မကောင်းတော့ဘူး။ ကိုယ့်ထက် ၄၊ ၅ နှစ်လောက်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ "သမီး၊ သမီး" နဲ့သွားသုံးရင် ဟိုဖက်လူက ဟာ.. ငါဒီလောက် အသက်ကြီးသွားပြီလား ဆိုပြီးဖြစ်တော့မယ်။ ပြီးတော့ နားထောင်လို့လည်း သိပ်မကောင်းတော့ဘူး။ အဲလိုမျိုးဆိုတော့ ဘာသုံးမလဲ။ "ညီမ" လို့သုံးလို့တော့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သူက သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ စကားပြောရင် နည်းနည်းထောက်နေတယ်။ နားထောင်ရတဲ့လူအတွက်ကတော့ မသိဘူး။ "ကျွန်မ" လို့သုံးရပြန်အောင်လည်း ဒီအသက်အရွယ်နဲ့က သိပ်မကိုက်သေးဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ်စကားပြောတဲ့လူအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ အဆင်ပြေတဲ့နာမ်စားကို ရွေးသုံးရရော။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကျောင်းမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်တွေ့ဖူးတယ်။ သူက တရုတ်။ အဲတော့ အိမ်မှာစကားပြောရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို "ဝေါ် ဝေါ်" နဲ့ပြောရော။ အိမ်မှာပြောနေကျဆိုတော့ ကျောင်းမှာလည်း အကျင့်ပါပြီး "ဝေါ် ဝေါ်" နဲ့ဖြစ်နေရော။ ဝေါ့ကလေ ဝေ့ါကိုလေနဲ့။ သူအဲလို ဝေါ် လို့ပြောတိုင်း အစခံရတယ်။ အဲတော့ အဲလိုသုံးဖို့ကလည်း မဟုတ်သေးပါဘူး။ တခြားဘာသာနဲ့လည်း အဆင်မပြေပြန်ဘူး။
အသက် ၂၀ ကျော်လောက်ကျတော့ အချင်းချင်းစကားပြောတဲ့အခါ ၊ ဟိုးအရင်ကတည်းက သိပြီးသားလူဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့။ အခေါ်အဝေါ်တွေက နှုတ်ကျိုးနေပြီလေ။ ဒါပေမဲ့ အခုလိုအချိန်မှ တွေ့တဲ့လူတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါကျတော့ နာမ်စားတစ်ခုသုံးရတော့မယ်။ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ပြောတဲ့အခါ "ကျွန်မ"လို့ သုံးလို့ရပြီပေါ့ ဒီလိုအသက်အရွယ်ရောက်တော့။ အဲ.. ဒါပေမဲ့ မိန်းကလေးအချင်းချင်းပြောတဲ့အခါကျတော့ "ကျွန်မ" လို့ ပြောလို့ အဆင်ပြေတဲ့လူတွေရှိမယ် မပြေတဲ့လူတွေရှိမယ်။ ဥပမာ အသက်ချင်း သိပ်မကွာတဲ့ လူတွေဆိုရင်ပေါ့။ အဲလိုလူတွေနဲ့ကျတော့ "ကျွန်မ" လို့ပြောရင် နားထောင်ရတာ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေရော။ "နင် ငါ" လို့ပြောရပြန်အောင်လည်း သူနဲ့က သူငယ်ချင်းမဟုတ်။ အဲဒါနဲ့ တချို့က "တို့" ဆိုတဲ့နာမ်စားကို သုံးလာရော။ အဲဒီ နာမ်စားကလည်း အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေလားဆိုတော့ မပြေသေးဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ "တို့" လို့သုံးတာက တချို့လူတွေအတွက်ဆို နည်းနည်းတင်စီးနေသလို အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်နေရော။ အဲဒါနဲ့ပဲ နောက်တစ်မျိုးရှာရပြန်ရော။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တချို့ကျတော့ မိန်းကလေးဖြစ်ပါရက်နဲ့ "ကျွန်တော်" ဆိုတဲ့ နာမ်စားကို ယူသုံးရော။ သူက သုံးရတာလွယ်တယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ကျတော့ သိပ်မလိုက်ပြန်ဘူး။ တချို့ကျပြန်တော့လည်း နာမ်စားနေရာမှာ ကိုယ့်နာမည်ကို ထည့်ပြောတယ်။ အဲဒါကတော့ အလွယ်ဆုံးပေါ့။ ကိုယ့်ထက်ကြီးကြီးငယ်ငယ် အဲဒီနာမ်စားနဲ့သုံးရုံပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူကလည်း တစ်ခုရှိတာက ကိုယ့်ရဲ့နာမည်က ခေါ်လို့ သုံးလို့ကောင်းရင် ကောင်းတာပေါ့။ အဲလိုမဟုတ်ပဲ နည်းနည်းသိပ်ခေါ်လို့မကောင်းပဲ နာမ်စားအနေနဲ့ သုံးလို့မရတဲ့ နာမည်ဆိုရင်တော့ ခက်ပြန်ရော။ ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ကျတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ အရွယ်သုံးပါး ကျွန်တော် ဆိုတာကို သုံးလို့ရတယ်။ ကိုယ်က စကားပြောရမယ့်လူက ငယ်ငယ်ကြီးကြီး "ကျွန်တော်" ဆိုတာကို သုံးလို့ရတယ်။ အဲဒီနာမ်စားတစ်ခုတည်းကို လက်ကိုင်ထားလိုက်ရင်ရပြီ။ ဘယ်လောက်အဆင်ပြေတဲ့ စကားလုံးလဲ။ ရှေးခေတ်တုန်းက စကားထွင်တဲ့လူတွေက ဘာလို့များ မိန်းမတွေအတွက် အဲလို သုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့ နာမ်စားမျိုး မထွင်ပေးခဲ့လဲမသိဘူး။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း မိန်းကလေးတွေက အဲဒီနာမ်စားကို သိပ်မသုံးလို့များ ကြားရတဲ့အခါ နည်းနည်းထောက်နေတာလားမသိဘူး။ အဲတော့ သူ့ကို "ကျွန်တော်" လိုမျိုး သုံးရတာ အဆင်ပြေသွားအောင် များများသုံးပေးရင်ကောင်းမလား။ ဒါမှမဟုတ် အဆင်ပြေတဲ့ နာမ်စားတစ်ခုထပ်ထွင်ရင်ကောင်းမလားပဲ။ အခုကျမှတော့လည်း ဘယ်သူကမှ စကားလုံးအသစ်ထွင်ချင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ မိန်းကလေးတွေမှာလည်း အဲလိုမျိုး အခက်အခဲတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ အခုတလော စဉ်းစားနေမိတာလေးပါ။ တခြားလူတွေကော ဘယ်လိုထင်ကြလဲမသိဘူး။
23 people have left comments
ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ အလိုက်အထိုက်နဲ့ အဆင်ပြေအောင် ပြောနေကြရတာပါပဲ။
ကိုယ်နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမယ့်သူနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှု အပေါ် မူတည်ပြီးတော့ (သမီး၊ တူမ၊ တို့၊ ကျွန်မ၊ အိုင်၊ ရှင့်၊ ညီမ)စသည်ဖြင့် နာမ်စားသုံးနှုန်း ရတာပါပဲ၊ အသစ် ထွင်ဖို့ စကားတော့ မတွေ့မိ ပါဘူး။ အားပေးလျက်ပါ
Posted on:November 16, 2008 at 8:25 PM Delete This Comment
တချို့လူတွေ ပြောသလို... `မီးကလေ...´ လို့ သုံးပြီးပြောပေါ့။
Posted on:November 16, 2008 at 9:15 PM Delete This Comment
အညတြ (ခေတ္တ နယူးယောက်ခ်) said:
ပုဂ္ဂလ နာမ်စား ကိုိ ဆီလျော် အောင် အ သုံး ပြုတဲ့ အ ခါ မှာ ပြော သူ နာမ် စား အ ဖြစ် မိန်း မ တွေ ဟာ အ သက် အ ရွယ် နဲ့ အ လိုက် နှိမ့် ချ တဲ့ သ ဘော နဲ့ ကျွန် မ ဆို တာ သုံး တတ် ကြ ပါ တယ်။ ငါ ဆို တဲ့ အ သုံး အ နုန်း ကို သုံး မဲ့ အ စား ကျွန် မ ဆို တာ က ပိုပြီး နား ထောင် ကောင်း မယ် လို့ ထင် ပါ ကြောင်း ကျွန် တော် အ မြင် အား တင် ပြ လိုက် ပါ တယ်။
Posted on:November 16, 2008 at 9:22 PM Delete This Comment
tu tu said:
အစ်မလည်း ညီမလိုပဲ တွေးမိတယ်။
ွှအစ်မထင်တာတော့ များများမသုံးပေးခဲ့လို့ ထင်တာပဲ။
ငယ်ငယ်က “သမီး” လို့ပြောကျင့်ရှိခဲ့တာကြီးကို တော်တော်နဲ့ မပြင်ခဲ့တော့ အသက်ကြီးမှ မသုံးမဖြစ် “ကျွန်မ”လို့လည်းသုံးရော အဆင်မပြေဖြစ်တော့တာပေါ့။
အထာမကျပေမယ့်လည်း “ကျွန်မ” လို့သုံးနေရတာပဲ ညီမရေ...
Posted on:November 17, 2008 at 9:28 PM Delete This Comment
su wai said:
ညီမလေးပြောတာ ဟုတ်တယ်နော်… ယောက်ျားလေးတွေဆို ငယ်ငယ်တည်းက “ကျွန်တော်”လို့ ပြောလို့ အဆင်ပြေပေမယ့် အစ်မတို့ မိန်းကလေးအတွက်တော့ “ကျွန်မ”လို့ ပြောရတာ တစ်မျိုးကြီးပဲ။ အစ်မဆိုရင် အခုအသက်အရွယ်ထိ “ကျွန်မ” လို့ပြောတာ သိပ်အကျင့်မရသေးဘူး။ ခင်တဲ့သူတွေနဲ့ဆို နာမည်ထည့်ပြော၊ ဒါမှမဟုတ်လဲ ညီမ၊ အစ်မ… အဲဒီလိုပဲ ပြောဖြစ်တာ များတယ်။ “ကျွန်မ”လို့ မပြောမဖြစ် ပြောရမယ့်နေရာတွေမှာ ချောချောမောမော ပြောနိုင်အောင် အကျင့်လုပ်ထားမှဖြစ်မယ်။
Posted on:November 17, 2008 at 9:35 PM Delete This Comment
Nyein Chan Aung said:
ဟုတ်တယ်ပိစိ.. ပိစိစဉ်းစားနေတဲ့ကိစ္စက ပိစိကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကိစ္စဖြစ်မယ်ထင်တယ်..။ အခုနောက်ပိုင်း တချို့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေရွယ်တူချင်းလည်း သမီးလို့သုံးတယ်ထင်တယ်..။ တမင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲ ရိုးသားစွာ သုံးစွဲတာဆိုရင်တော့ နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်တဲ့ သူကို သမီးလို့သွားသုံးရင်တော့ တမျိုးပေါ့နော်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သမီးဆိုတဲ့ နာမ်စားကို အစ်ကိုကတော့ သဘောကျပါတယ်။ ယဉ်ကျေးတယ်လို့လည်းထင်တယ်..။
Posted on:November 18, 2008 at 11:28 AM Delete This Comment
မတူးတူးသာ ပြောသလိုပဲ ။
ကိုယ်လည်း ငယ်ငယ်က သမီးလို့ ပြောတာ။ ခုတော့ ခက်တယ်လေ။
Posted on:November 18, 2008 at 11:30 AM Delete This Comment
ကိုဝင်းဇော်၊ ကိုဟန်သစ်ငြိမ်၊ အညတြ (ခေတ္တ နယူးယောက်ခ်)၊ မတူးတူး၊ မဆုဝေ၊ ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်၊ မပန်ဒိုရာ နဲ့ ဆီဗုံးမှာ ဝင်ပြောသွားသူ အားလုံးပဲ ဝိုင်းဆွေးနွေးပေးကြတာ ကျေးဇူးပါနော်။
Posted on:November 18, 2008 at 6:12 PM Delete This Comment
ဟုတ်တယ် .. ညီညီဆို ခုထိ ကျွန်မလို့ မသုံးတတ်သေးဘူး.. နာမည်ကလည်း ယောက်ျားနာမည်ဖြစ်နေတော့ သိပ်မလွယ်ဘူး .. ဒါပေမယ့် ညီညီလို့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သုံးဖြစ်တယ်..
ဒီလိုလုပ်ရအောင်.. “များကလေ” ဆိုပြီး သုံးရင်ရော..
Posted on:November 21, 2008 at 5:11 AM Delete This Comment
ဒီကိစ္စကို ပြင်ဆင်ချင်ရင် သမိုင်းစောစောပိုင်းကို ပြန်သွားရမယ် ထင်တယ် ညီမလေး...။
အသက်အရွယ်နဲ့ နားထောင်တဲ့လူပေါ်မူတည်ပြီး လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင်ပြောနေရတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတ.ယ်..။ နာမ်စားက တသမတ်တည်းဆို ပျင်းစရာကြီး..။
Posted on:November 28, 2008 at 12:32 AM Delete This Comment
Mhaw Sayar said:
ဒီဆောင်းပါး ဖတ်ပြီး စဉ်းစားတာတွေက နဲနဲများများသွားလားလို့.. ကိုယ်ပါ ကျွန်တော် သုံးရမလား. ကျွန်မသုံးရမလား ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး..ဦးနှောက် စားသွားတယ်. :P
ဒီနေရာမှာတော့ မလေးမ တွေးသလိုပဲ ကိုယ်လည်း တွေးမိတယ်။ မြန်မာဘာသာက တစ်ကယ်တော့ စကားလုံးတွေ အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ ဘာသာတစ်ခုပါ။ အခြေအနေ တစ်ခုတိုင်းစီ အတွက် အနည်းဆုံး ၂ ခုကနေ ၄-ခု၊ ၅- ခု လောက် အထိ ပြောင်းသုံးလို့ရတဲ့ ဝေါဟာရတွေ ရှိကြတယ်။ ဥပမာဆိုရင် အဖေဘက်က တော်တဲ့ ဦးလေး နဲ့ အမေဖက်က တော်တဲ့ ဦးလေး ကိုတောင် ကိုယ်တို့ နယ်ဘက်တွေမှာ ခေါ်တာ မတူကြဘူးလေ။
အဲဒါကိုပဲ အနောက်တိုင်း အမြင်နဲ့ကျတော့ စကားလုံး ကျစ်လစ်မှုမရှိဘူး၊ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဘာသာစကား တစ်ခု စသဖြင့် မြင်ကြပြန်ရော။
ထားပါ။ ဒါက သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်ဆိုတာ ရှိတတ်တော့ ဘာမှ ထပ်ပြောစရာ မရှိဘူးလေ။ အခုလောလောဆယ် ညီမပြောတဲ့ အသုံးအနှုံးတွေထဲက ရာနှုန်း အများဆုံးနဲ့ အခြေအနေ တော်တော်များများမှာ အမြဲသုံးဖို့ အသင့်တော်ဆုံး အသုံးအနှုံးလို့ ကိုယ်ယူဆမိတာ ပြောရရင်တော့ ကျွန်မ (ကျမ) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးပဲ။
အိမ်မှာ၊ အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ၊ နောက် အမျိုးတွေနဲ့ (ဦးလေးတွေ၊ အဒေါ်တွေ) ပြောတဲ့ အခါမှာ သမီးလို့ ပြောလို့ရသလို တစ်ကယ်တန်း အပြင်လောကထဲ ရောက်လို့ သူစိမ်းတွေအားလုံး (ဆိုလိုတာက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းတက်ဖော်ဖြစ်ဖြစ်၊ သိတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်၊ မသိတဲ့သူဖြစ်ဖြစ် ပေါ့) တွေနဲ့ပြောဆို ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာတော့ ကျမ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးကပဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အခြေအနေအားလုံး အတွက် အိနြေ္ဒရှိတယ်၊ သူ့ကိုရော၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပါ လေးစားမှု ကိုဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တယ် လို့ကိုယ်တော့ ထင်မိတယ်။ (ရင်းနှီးသွားလို့ အခေါ်အဝေါ် ပြောင်းလဲ သုံးတာကတော့ ချွင်းချက်ပေါ့လေ.)
ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးသူတွေနဲ့၊ ခင်တဲ့ မင်တဲ့ သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါကြရင်တော့ ညီမ ဆိုတာကပဲ ပိုသင့်တော်တယ် လို့ထင်မိတယ်။ စကားလုံး ခပ်တောင့်တောင့် ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကတော့ ကိုယ်နဲ့ အကျွမ်းတစ်ဝင် သိပ်မသုံးဖြစ်သေးလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ညီမရေ။
သမီး အသုံးအနှုံးကတော့ ညီမပြောပြီးသလိုပဲ။ အလိုလိုနေရင်း ကိုယ်ပါ အန်ကယ်ကြီး ဖြစ်ဖြစ်သွားသလို ခံစားရလို့ လူမှု ဆက်ဆံရေးမှာ ပြောဆိုသုံးစွဲဖို့အတွက် ဦးစားပေး နေရာကနေ ထည့်သွင်း မစဉ်းစားသင့်ပါကြောင်း. :P ကိုယ်ထင်ရာ ကိုယ် အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ :D
Posted on:December 1, 2008 at 1:15 AM Delete This Comment
အိပ်မက်လည်းငယ်ငယ်ကတည်းက အဲဒီကျွန်မကိစ္စကိုစဉ်းစားဖူးတယ်၊ ခုလည်း သူစိမ်းတွေနဲ့ဆို အကျင့်လုပ်ပြီးသုံးတယ်၊ မြန်မာမိန်းကလေးတွေက ကျွန်မလိုသုံးရမှာ နှုတ်မရဲကြသလိုပဲ၊ နှစ်ဆယ်မပြည့်ခင်သမီးဆိုတာက သင့်တော်ပေမယ့် အဲဒီအသက်ကျော်သွားရင် မကောင်းတော့ဘူးနော်၊ နောက်ပြီး အသက်ခပ်ကြီးကြီးယောင်္ကျားတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံလို့ သမီးသုံးနေရင်လည်း တစ်မျိုးကြီးပဲ၊ နောက်ပြီး သူစိမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေ၊ အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ ကျွန်မလို့သုံးတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု ပိုရှိစေတယ်လို့ထင်တာပဲ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို အရွယ်ရောက်လာရင် သုံးဖြစ်အောင် အကျင့်လုပ်ထားသင့်တယ်နော်
Posted on:December 11, 2008 at 12:39 PM Delete This Comment
နေရာအတော်များများမှာ အဆင်ပြေတာကတော့ ကျွန်တော် ဖြစ်နေပါတယ်ကွယ်။ ငယ်သူတွေကို ပြောတဲ့အခါတော့ မကောင်းပေမယ့် အခြေအနေတော်တော်များများမှာ အဲဒီ နာမ်စားက အဆင်ပြေလို့ အဲဒီ နာမ်စားပဲ သုံးဖြစ်ပါတယ်။ နော်ကပြီး အဲဒီလို တကူးတက စဉ်းစားပြီးမှ ထွက်လာမယ့်စကားဆိုရင် အင်း.................. မပြောဘဲသာ နေလိုက်ချင်တော့တယ်။ လိင်ခွဲခြားမှုကို ဒီအထိယူလာတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့နော်။ အမျိုးသားအများစုကတော့ ကျွန်မဆိုတာကို နားဝင်ချိုကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကိုယ်အဆင်ပြေဖို့ လိုရင်းဆိုတဲ့မူကို လက်ကိုင်ထားပြီး ကျွန်တော်နဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး ချီတက်လျက်။
Posted on:December 27, 2008 at 1:12 AM Delete This Comment
Z a.k.a ANGELIC-DEVIL said:
့အဲဒီ ကျွန်မ ဆိုတာကြီးက ခက်နေတာ :P
Posted on:January 2, 2009 at 7:18 PM Delete This Comment
BLACK DREAM said:
ဟူး...။ သူပြောမှပဲ လူလဲလည်ထွက်သွားတာပဲ..။ သားတို့ကတော့ ကရေးပဲချိသေးတယ်..။ ဒါတွေတိဘူး :P
Posted on:February 14, 2009 at 3:10 PM Delete This Comment
ပဲာပဲာ.. ငါကတော့ အခုတလော ကျွန်တော်လို့ သုံးဖြစ်နေတယ်.. နားထောင်လို့တော့ ကောင်းပါတယ်ပာ.. တခြား ခင်ပြီးသားလူတွေအတွက်တော့ ပုံမှန်အတိုင် သမီး ပေါ့.. နင်ရော.. ဘယ်လိုလဲ.. သူငယ်ချင်းအသစ်တွေ များလာလို့လား.. ဒါမှမပာုတ် လာမိတ်ဆက်တဲ့သူတွေ ရှိလို့လား.. ရိုးတော့မရိုးဘူးနော်.. ဝင်္ကပါမ.. :P စကားမစပ် အိမ်လေးပြောင်းထားတာ အခုမှသိတယ်..
Posted on:February 23, 2009 at 5:16 AM Delete This Comment
တူးတူး ကတော့ ကိုယ့်နာမည် ကိုယ်ထည့်သုံးတယ်။ အဲဒါက အရွယ်သုံးပါးမရွေး ဘယ်သူ့ ကို မဆို ပြောဆို ဆက်ဆံလို့ရတယ်။ ကိုယ့်နာမည် ကိုယ်မသုံး ခင်ကဆို သမီးလို့သုံးရမလိုလို၊ ကျွန်မ လို့ပြောပြန်ရင်လည်း ကိုယ့်အရွယ်နဲ့မှ မလိုက် သိပ်ရင့်ကျက်နေသလိုလို၊ ဘယ်လိုကြီးမှန်းကို မသိ ဖြစ်နေရော။ ခုတော့ အေးရော။
Posted on:March 18, 2009 at 7:09 PM Delete This Comment
ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ ဆိုတဲ့စာလုံးပေါင်းက မြန်မာဘုရင်တွေခေတ် "ကျွန်တော်မျိုး၊ ကျွန်တော်မျိုးမ" ကနေလာတာလားမသိဘူး။ မလေးက မြန်မာစာအဓိကမဟုတ်တော့ သေချာမသိ၊ အဲသလို ကျွန်မ ဆိုပြီး မရေးချင်လို့ မလေးတော့ ကျမ လို့မလေးရေးတယ်။ အပြင်မှာတော့ ဦးကြီးဒေါ်ကြီးစသဖြင့် ပြောတဲ့လူပေါ်မှာမူတည်ပြီး ပြောရတာပါပဲ။ အမှန်ပြောရရင် I နဲ့ You လိုဟာမျိုး ရိုင်းရာလဲမကျတဲ့ နာမ်စားတစ်ခုခု တီထွင်နိုင်ရင် အားလုံးတွက်ကောင်းမလားမသိ။
Posted on:May 19, 2009 at 1:21 AM Delete This Comment
ဒေါင်းသေချာင်းမှာ ပျော်သည့် ကျား said:
တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ယောကျာင်္းလေးအချင်း အကြီး အငယ် ပြောရင် ညီလေး ကိုယ်က ဆိုတာတွေ နဲ့ တောင် ရှုပ်နေတာ၊ မိန်းကလေးတွေကတော့ အစ်မ ကျွန်တော် က နားထောင် ကောင်းသေးရဲ့၊ ညီမ အစ်ကို ဆိုပြန်တော့ လည်း နား ကလိကလိ ဖြစ်၊ ဟော နောက်ဆုံးတော့ မင်းနဲ့ ငါနဲ့ ပြောလိုက်တာ အေးရော . မတိမ်းမယိမ်းတွေဆိုလည်း ခင်ဗျား / ကျွန်တော်က ထောက်တော့ တို့ သိပ်မကွာကြပါဘူးကွာ မင်းနဲ့ ငါနဲ့ ဘဲနားအေးပါတယ် ဆိုတာ ပိုကောင်းပါတယ်လို့ သဘောတူညီမှု ယူလိုက်ရပြန်တာလေ......အင်း ပြောရရင် တော့ ကျွန်တော်တို့ ဝေါဟာရကြွယ်ဝတာ ကောင်းလည်း ကောင်းတယ် ကောင်းလည်း မကောင်းဘူးဗျ... အင်း သူများခေါင်းခြောက်တာကို ၀င်ပြီး အလေးပိုးသလို ဖြစ်နေပြီလားသိဘူး ဘာဘဲ ပြော ရှာကြံတွေးနိုင်တဲ့ အတွက် မင်္ဂလာပါ
Posted on:May 19, 2009 at 1:48 AM Delete This Comment
ဟုတ်တယ်နော်။ ညီမလေးပြောတာမှန်တယ် အမလည်း အဲလိုတွေးမိဘူးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လို ပြောရမှန်းမသိဘူး။ ခုတော့အမအရွယ်ဆိုတော့လည်း အမပဲဖြစ်နေပြီ။ စာရေးရင်တော့ ကျွန်မလို့ ပဲသုံးရတော့တယ်။ အရင်ရေး ကာစကတော့တစ်မျိုးကြီးပဲ။ ကျွန်မလို့ မသုံးတတ်ခဲ့ဘူး။ ခုတော့လည်း သုံးနေကျသွားပါပြီ။
Posted on:July 23, 2009 at 3:45 AM Delete This Comment
Posted on:November 27, 2009 at 2:47 PM Delete This Comment
Posted on:September 4, 2010 at 5:13 PM Delete This Comment
phung bella said:
Posted on:June 19, 2012 at 3:50 AM Delete This Comment
-Posted: November 16, 2008 at 8:25 PM
ဟန်သစ်ငြိမ်Posted: November 16, 2008 at 9:15 PM
အညတြ (ခေတ္တ နယူးယောက်ခ်)Posted: November 16, 2008 at 9:22 PM
tu tuPosted: November 17, 2008 at 9:28 PM
su waiPosted: November 17, 2008 at 9:35 PM
Nyein Chan AungPosted: November 18, 2008 at 11:28 AM
pandoraPosted: November 18, 2008 at 11:30 AM
WinkabarPosted: November 18, 2008 at 6:12 PM
နန်းညီPosted: November 21, 2008 at 5:11 AM
လေးမPosted: November 28, 2008 at 12:32 AM
Mhaw SayarPosted: December 1, 2008 at 1:15 AM
နေ့အိပ်မက်Posted: December 11, 2008 at 12:39 PM
AnonymousPosted: December 27, 2008 at 1:12 AM
Z a.k.a ANGELIC-DEVILPosted: January 2, 2009 at 7:18 PM
BLACK DREAMPosted: February 14, 2009 at 3:10 PM
AnonymousPosted: February 23, 2009 at 5:16 AM
AnonymousPosted: March 18, 2009 at 7:09 PM
AnonymousPosted: May 19, 2009 at 1:21 AM
ဒေါင်းသေချာင်းမှာ ပျော်သည့် ကျားPosted: May 19, 2009 at 1:48 AM
အနမ်းPosted: July 23, 2009 at 3:45 AM
AnonymousPosted: November 27, 2009 at 2:47 PM
AnonymousPosted: September 4, 2010 at 5:13 PM
phung bellaPosted: June 19, 2012 at 3:50 AM